MARCA oo daaha ka rogtay sababtii rasmiga ahayd ee ay Barcelona u imaan weysay xafladii xalay – Gool FM
MARCA oo daaha ka rogtay sababtii rasmiga ahayd ee ay Barcelona u imaan weysay xafladii xalay
Kaafi January 10, 2017
(Barcelona) 10 Jan 2016. Mid ka mida waxyaabihii ugu hadal haynta badnaa xafladii xalay ayaa ahayd maqnaashihii xiddiga Barcelona, afar ka mida oo kala ah Messi, Neymar, Iniesta iyo Pique waxa ay ka mid ahaayeen kooxdii FIFA PRO.
Mar marsiiyadii rasmiga ahayd ee Barcelena bixisay waxa ay ahayd in aysan uga soo qeyb galin sababo la xiriira diyaar garawga ay ugu jiraan kulanka Copa del Rey ee ay arbacada la dheelayaan Athletic Bilbao, laakiin sheekadaas xoogaa wey yara adag tahay in la liqo.
SIDAG U DHIG: Hadii Leo Messi ama Andres Iniesta ku guuleysan lahaa abaalmarinta, waxaad sharad ku dhigan kartaa in ay imaan lahaayeen.
Andres Iniesta shaashadaha ayuu ka soo muuqday si uu raali galin uga bixiyo maqnaashihii Barcelona, laakiin dareenka wali waxa uu ahaa in ay dadaal sameyn kareen.
Laakiin maqnaashehooda sabab uma ahayn Messi iyo Iniesta oo aan abaalmarinta helin.
Sida laga soo xiganayo Marca, ciyaaryahanada ayaa qaatay go’aanka ay uga maqnaadeen xaflada, sababtuna waxaa lagu sheegay in aysan ku qanacsaneyn boodhka sare ee Barca.
Ciyaaryahanada waxa ay ka carreysan yihiin maamulka sare ee naadiga maadama aysan agaasimeyaal daawada u soo dirin kulankii Copa del Reyga lugtiisii hore ee Atheltico Bilbao.
Waxaa muuqata in Barcelona ay ku dhawdahay in uu dagaal siyaasadeed oo gudaha ka dhex bilowdo.
RASMI: Stevan Jovetic oo amaah ugu biiray kooxda Sevilla
Luis Enrique oo ku taageeray ciyaartoydiisa go'aankii ay uga maqnaadeen xafladii FIFA